10 သင်၏လက်ကိုခရီးဆောင်သေတ္တာ Organize စေရန်မည်သို့သိကောင်းစရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 သင်၏လက်ကိုခရီးဆောင်သေတ္တာ Organize စေရန်မည်သို့သိကောင်းစရာများ
အဘယ်သူမျှမရဲ့အရှည်အရေး ခရီး - ကတနင်္ဂနွေဖြစ် ကမ်းခြေထွက်ပြေးဖို့ သို့မဟုတ်သုံးပတ်ကြာဟိမဝန္တာခရီးစဉ် - သင်သည်မည်သည့်အရွယ်အစားအိတ်ကိုမဆိုထုပ်ပိုးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်, ပြီးတော့သင်မည်သို့စုစည်းရမည်ကိုသိလိုလိမ့်မည်, ဒီဘလော့မှာမင်းလက်ဆွဲအိတ်ကိုအာရုံစိုက်ပါ့မယ်. ရောက်စေဖို့အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်: သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်၏အမျိုးအစားနှင့်အရှည်, သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်, ရာသီဥတု, သင့်ရဲ့အိတ်ရဲ့အရွယ်အစား, သင့်ရဲ့အားဖြင့်ချမှတ်ထားနှင့်မည်သည့်အလေးချိန်ကန့်သတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး mode ကို. နှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအကြောင်းရင်းများနှင့်အတူကစားမှာပါ, လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည် overpack သို့မဟုတ်အောက်တြင္း, သင်နောက်ဆုံးမိနစ်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြအထူးသဖြင့်လျှင်. overpacking ရှောင်ကြဉ်ပါ, ဤအနှင့်သင်၏ရထား boarding တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့အိတ်များနှင့်အခြားအဆငျမပွမှေုမှတဆင့်တူးဖော်ခြင်း 10 သင်၏လက်ကိုအိတ်စည်းရုံးဖို့ဘယ်လိုပေါ်အကြံပေးချက်များ.
သင်၏လက်ကိုခရီးဆောင်သေတ္တာသိကောင်းစရာ Organize ရန်ကဘယ်လို 1: သီးခြားသင့်ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများသိမ်းဆည်းထားပါ
ဤအရာသည်သင်၏လက်ဆွဲအိတ်ကိုမည်သို့စီစဉ်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်သောအခါစဉ်းစားရမည့်အရေးကြီးဆုံးအရာများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်. သီးခြားသင့်ရဲ့ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများသိမ်းဆည်းထားပါ. ဒီလိုလုပ်ဖို့အဆင်ပြေရာဖြစ်၏ဒါပေမယ့်လည်းဘေးကင်းလုံခြုံရာတစုံတခုလုပ်ဖို့မသာ. သင်၏လက်ကိုအိတ်ထဲကနေဖယ်ရှားပစ်ရန်လွယ်ကူသောကြောင်းကိုအနည်းငယ်အိတ်၌ထားတော်မူ၏. သင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လိုအပ်ပါတယ်အခါတိုင်းတူးရန်မလိုပါကြောင်းလမ်း, လက်မှတ်တွေသို့မဟုတ်ပိုက်ဆံ.
သင်၏လက်ကိုခရီးဆောင်သေတ္တာသိကောင်းစရာ Organize 2: တစ်ဦးက Pack များစာရင်း Make
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်? စစ်ဆေးခြင်း. သွားပွတ်တံ? စစ်ဆေးခြင်း. နေရောင်ကာကွယ်ဆေး? စိတ်ငြိမ်သက်ဘို့သင့်ကိုဖုံးလွှမ်းအခြေခံလိုအပ်ချက်များတယ်ပြီ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပ်ပါ ခရီးသွားစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း ရက်အနည်းငယ်ခရီးစဉ်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်သတ်မှတ်!
သင်၏လက်ကိုခရီးဆောင်သေတ္တာသိကောင်းစရာ Organize 3: အစွန်းအထင်းကိုရှောင်ပါ
သင်သာသင်ပင်သူတို့ကိုမသုံးလို့ရပါတယ်ကိုရှာယူသွားဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်အရာကိုအဝတ်ရွေးချယ်ဖို့ဤမျှလောက်အချိန်ယူပြီးထက်ပိုပြီးနှောင့်အယှက်မရှိ! နောက်တဖန်ဤပြဿနာရှိတယ်ဘယ်တော့မှမ. ပထမဦးစွာ သင်အမြဲသင်၏အလင်းရောင်စုံအဝတ်ထွက်အထဲမှာထုပ်ပိုးနေကြသည်သေချာအောင်သင့်တယ်, နှင့်ဒုတိယအ, ဟိုတယ်တစ်ခါသုံးရေချိုးခန်းထုပ်ဖို့အပေါ်ကိုင် နှင့်သင်၏ဖိနပ်၏ခြေရင်းကိုဖုံးလွှမ်းရန်သူတို့ကိုသုံးပါ.
အဖျား 4: roll ပြီးတော့ဖုန်စုပ် Pack ကို
အာကာသကိုကယ်တင်နှင့် creasing ရပ်တန့်ရန်, သင်၏အဝတ်လှိမ့်အစားသူတို့ကိုခေါက်, ထို့နောက်လေဟာနယ်ချုံ့အိတ်၌သူတို့နေရာ. ဤအအိတ်သုံးစွဲဖို့, သင်၌အဝတ်ဝတ်, အိတ်တံဆိပ်ခတ်ထား, ထို့နောက်လေထုညှစ်ထုတ်. ဤသည်အားဖြင့်သင်တို့ကိုချန်ထားမည် သင့်ရဲ့ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာထဲမှာအများကြီးပိုပြီးအာကာသ နှင့်တွန့်တားလိမ့်မယ်.
အဖျား 5: ခရီးဆောင်သေတ္တာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
သင့်ရဲ့အိတ်သော့ခတ်နဲ့သော့ခတ်သူတို့ကိုစောင့်. သင်သန့်စင်ခန်းအသုံးပြုတဲ့အခါသင်နှင့်အတူသူတို့ကိုယူပါ. ဒီမဖြစ်နိုင်ပါနှင့်သင်တစ်ဦးတည်းခရီးသွားနေတယ်ဆိုရင်, သင်နှင့်အတူအားလုံးတန်ဖိုးရှိသောပစ္စည်းများကိုယူဆောင်လာ. ကင်မရာများထားခဲ့ပါဘယ်တော့မှမ, ပိုက်ဆံ, အီလက်ထရွန်းနစ်သို့မဟုတ် unguarded ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများ.
သငျသညျအိပျပျြောနေချိန်တွင်သော့ခတ်သင့်ရဲ့အခန်းကိုသိမ်းဆည်းထားပါ, ဖြစ်နိုင်လျှင်. သူစိမ်းယုံကြည်စိတ်ချမနေပါနဲ့. ဝတ်ဆင်တောင်မှရေတွင်းတစ်တွင်း လူစိမ်း သူခိုးဖြစ်ဖို့အထဲကလွဲစေခြင်းငှာ. သငျသညျခရီးသွားများအတွက်အတူအခန်းအတွင်းအိပ်ပျော်နေသောနေတယ်ဆိုရင်သင်မသိသော, တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ထံမှယူဖို့ကြိုးစားပါတယ်လျှင်သင်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံခါးပတ်၏ထိပ်ပေါ်မှာအိပ်ရန်သေချာစေပါ.
အဖျား 6: Pack Cube ကိုသုံးပါ
” ငါ့ကိုသလောက် color-coded Cube သို့ငါ၏အဥစ္စာခွဲဝေအဖြစ်စနစ်တကျလူ့တူသောခံစားရစေသည်အများကြီးမရှိပါ. ဒါဟာသင်ယူဆောင်အရာအားလုံးမကြာမီသင်ကဲ့သို့ကဲ့သို့ဖြစ်၏အတိအကျဘယ်မှာသိရန်ဒါအံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်ဇီပ် သင့်ရဲ့ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာ. Plus အား, သင်သည်သင်၏ထုပ်ပိုးခြင်း Cube များကိုလွယ်ကူစွာသင်၏ဟိုတယ်၏အံဆွဲထဲသို့ရွှေ့ပြောင်းပြီးချက်ချင်းဖြုတ်။ သွားရန်အဆင်သင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။” - Richelle Szypulski, အကြီးတန်းတွဲဘက်အယ်ဒီတာ
အဖျား 7: လက်ခရီးဆောင်သေတ္တာများအတွက် Size ကိုကန့်သတ်
လေယာဉ်ဆင်တူ, များစွာသောရထား သင်တို့အပေါ်မှာသယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သောအိတ်၏ပမာဏနှင့်အရွယ်အစားအပေါ်ကန့်သတ်ပြီ. ယေဘုယျအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ခရီးဆောင်အိတ်များအားလုံးအပေါ်သယ်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ရထားလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကအရွယ်အစားသို့မဟုတ်အလေးချိန်ကန့်သတ်အပေါ်သယ်ဆောင်ထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ရပ်၌သင်တို့၏ပိုလျှံအိတ်စစျဆေးဖို့သငျသညျလိုအပ်နိုင်ပါသည်. အများဆုံးရထားများအတွက်, သငျသညျဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်နှစ်ခုအိတ်ရထားပေါ်တွင်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်, နေသမျှကာလပတ်လုံးအသီးအသီးအိတ်ထက်မပိုပါဘူးအဖြစ် 50 ပေါင်သို့မဟုတ်ထက်ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ပါသည် 28 X ကို 22 X ကို 14 လက်မ. ထိုကဲ့သို့သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများနှင့်ဆေးဝါးအဖြစ်အသေးစားနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပစ္စည်းများ, ခေါင်းအုံး, စောင်, coolers, ထက်နှင့်ပိုက်ဆံအိတ်သို့မဟုတ်အိတ်လျော့နည်း 12 X ကို 12 X ကို 12 လက်မအိတ်ကိုန့်သတ်ချက်အပေါ်သယ်ဆီသို့ရေတွက်မည်မဟုတ်ပါ.
အဖျား 8: လက်ခရီးဆောင်သေတ္တာထဲမှာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
သင်ဘယ်လိုများသောအားဖြင့်သင့်ရဲ့အီလက်ထရွန်းနစ်အပေါငျးတို့သစည်းရုံးကြဘူး, ကေဘယ်လ်ကြိုး, လုံခြုံရေးမှာထွက်တူးဖို့သငျသညျအသက်အရွယ်ယူသောသူတို့ fiddly-bits? ကျွန်တော်တို့ကို၏ကျန်ကဲ့သို့သူတို့ကိုငါအတွက် Stuff? ကောင်းစွာ, သင်သည်သင်၏လက်အိတ်စုစည်းချင်လျှင်ကိုယ့်ကိုယ် ziplock အိတ်တစ် stash ရ. ဖုန်းကိုအားသွင်း, ကင်မရာကိုအားသွင်း, Adapter က, နားကြပ် - အပိုပလပ်စတစ်အိတ်ယူ (သငျသညျလကျအိတ်အရည်အတွက်အသုံးပြုမယ်လို့တူညီသူတွေကို) နှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရန်သူတို့ကိုအသုံးချ, ခရီးအိမ်ပြန်ဘို့အမှုအရာ (အိမ်သူအိမ်သားသော့, ယာဉ်ရပ်နားလက်မှတ်, နှင့်ကားသော့), ဆေးဝါးနှင့်အခြားချောင်ဆက်စပ်ပစ္စည်း.
အဖျား 9: စာအုပ်များ Pack ရန်ကဘယ်လို. မလုပ်ပါနှင့်!
ထိုသို့ရနှေးငှေ့မြားသောဟုတ်မဟုတ် အချစ်ဇာတ်လမ်းဝတ္ထု, စိတ်လှုပ်ရှားစရာသိပ္ပံဝတ္ထု, ဒါမှမဟုတ်ခွေး eared ခရီးသွားလမ်းညွှန်, ခင်ဒေါင်းလုဒ်သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်. ပင်ဆိုရင်အိမ်မှာသင်စက္ကူသေးပါဘူးကျွန်တော်ဟာသေမျိုး, သင်၏လက်ကိုအိတ်များအတွက်အာကာသနှင့်အလေးချိန်နဲ့ save မ wifi အပေါ်ရေတွက် သင့်ရဲ့ဿုံ positioned ကမ်းခြေကုလားထိုင်ကနေပြန်ဇာတ်လမ်းကိုသို့ခုန်, ရုံသေချာအောင်ကြောင့်တစ်ဦးအပေါ်ရေကိုခံနိုင်ရည်အဖုံးကိရိယာ.
အဖျား 10: ဒါဟာအားလုံးထဲက lay
ငါစူပါရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြောင်းကို. ငါကဝန်ခံ. နှင့်စနစ်တကျ! သို့သော်လည်းအဘယ်သို့လျှင်ပင်ငါဖြောင့်သည်ငါ့ခေါင်းကိုရဖို့ငါ့ကိုကူညီပေးသည် အလွန်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာ pack ကို, မည်သည့်ပစ္စည်းကိုငါ့အအိတ်ထဲသို့ဝင်ရှေ့၌ငါအရာအားလုံးထွက် တင်. ရန်အချိန်ယူခြင်းဖြစ်သည်. ငါ့အိပ်ရာပေါ်သောအရာတို့ကိုအတူတကွအုပ်စုခွဲငါ့ကိုသူတို့၏အလေးချိန်ဆွဲထုတ်ကြဘူးသောအရာကိုပစ္စည်းများကိုအလျင်အမြန်တွေ့မြင်ကူညီပေးသည်. တစ်ဦးတည်းသာထိပ်ပိုင်းနှင့်အတူဝတ်ဆင်နိုင်ဘောင်းဘီတစ် pair တစုံ, သို့မဟုတ်ငါပြီးသားထုပ်ပိုးဖို့စီစဉ်မခံခဲ့ရဖိနပ်လိုအပ်ပါတယ်? ပြန်အံဆွဲထဲမှာ, သင်သွားသည်! အရာရာကိုကျွန်ုပ်မစတင်မီရှင်းလင်းစွာမြင်ခြင်းကကျွန်ုပ်အားအရာရာကိုကျွန်ုပ်၏အိတ်ထဲသို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာလိုက်ဖက်စေရန်ကူညီပေးသည်. ကျွန်တော့်အတွက်, ဤအမှုသည်ငါ့ bulkiest ပစ္စည်းများနှင့်အတူစတင်ဆိုလိုတယ်, ထို့နောက်ချယ်ရီကနေတည်ဆောက်မယ့်ကြံ့ခိုင်အခြေစိုက်စခန်းအလွှာဖွဲ့စည်းရန်သူတို့ကိုလှည့်ပတ်ကွက်လပ်သို့ tuck မှပေါ့ပါးပစ္စည်းများကောက်နေ.
ဤအကြံပြုချက်များသင်သည်သင်၏လက်အိတ်စုစည်းဖို့ဘယ်လောက်ထွက်တွက်ဆကကူညီပေးခဲ့ဖူး? ကျနော်တို့သိရန်ကိုချစ်မယ်လို့! တဆင့်ရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန် တစ်ဦးကရထား Save နှင့်ဤအကြံပြုချက်များကို အသုံးပြု. ပြီးနောက်သင်၏လက်ကိုအိတ်၏ Picks ဖမ်းယူ!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 သင်၏လက်ကိုခရီးဆောင်သေတ္တာ Organize စေရန်မည်သို့သိကောင်းစရာများ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-organize-hand-luggage%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#လက်ဆွဲအိတ် #ကဗျာ #မင်္ဂလာပါ #မီးရထား